🌻 Girasole🌻 Igumbi eliphindwe kabini elinebalcony ejonge ilali - I-Airbnb
🌻 Girasole🌻 Igumbi eliphindwe kabini elinebalcony ejonge ilali
Zicwilise kwindalo kweli gumbi lihle kakhulu elinegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo nelinye igumbi, i-villa enomnyango ozimeleyo.Relax kwibalcony encinci enombono othe ngqo welali Yiza wonwabele ububele bethu kumganyana nje osuka elwandle, kwindawo ezolileyo. tyelela iMinturno kunye nedolophana yayo, iilwandle ezintle kwaye uphumle emva kokubuya elwandle kwindawo ejikelezwe yindalo.
I-Minturno liziko elityebileyo kwimbali efanelekileyo kuwo onke amaxesha onyaka.
Indlu ijikelezwe yindalo kodwa umganyana osuka elwandle. Ngapha koko, xa ufika endlwini ungonwabela i-panorama entle.
Indawo yokuhlala ifumaneka kufuphi nenqaba yaseminturno, kwaye iquka i-villa ye-3-storey, apho i-2nd kunye ne-3 ifikeleleka kwiindwendwe ezinomnyango ozimeleyo.
Indawo efanelekileyo yokunandipha ukuphumla okuncinci kwaye udibanise kunye nokuzonwabisa kweendawo zeeholide eziza ebomini kwiinyanga zasehlotyeni, zizalise ngokuzonwabisa.
Irhafu yabakhenkethi ye-euro eyi-1.00 ukuba ihlawulwe kwisakhiwo
Umbindi wesixeko saseminturno nangona liziko elincinci ligcwele imbali kunye nokunyakaza, ngakumbi kwiinyanga zasehlotyeni.Ukusukela ngo-Epreli ukuya ku-Okthobha kuzaliswe bubomi bombulelo kukhenketho lolwandle, ngelixa kwiinyanga zasebusika ilungile kwabo banqwenela ukukhupha iintsuku ezimbalwa kwisiphithiphithi sesixeko kwaye bazintywilisele ekuphumleni okunikezwa yindalo apha.
Singabantu abaluncedo kunye noluntu, kwaye sihlala kumgangatho ophantsi wale villa siyakwazi ukufumaneka kwiindwendwe zethu nangaliphi na ixesha. Ukongeza kunjalo ukubonelela ngeenombolo ezimbini ezihambayo kuyo nayiphi na into eyenzekayo.